Fiangonana ho Mosquée? | Hevitra MPANOHARIANA
zany ve tsy efa tendance musulman mintsy le. Ny tsy hitovizana fotsiny nga d le hoe zoma no mivavaka ny silamo, ny lelah mahazo manambady hatr@ 4, ary ny vevavy misarin-doha... Tsy misy maharatsy azy aloha le fombafomba fa zany hoe lery manana tendance hanao otran'le @ secta @ film no atahorana. Le ho tonga @ suicide communautaire no tsy laitra, hehe Ary mahazo vola ihany zany lery ra atao ny kaonty an :) Mba manatsara ny tanana ihany ve aloha ny poziny sa ahoana e ?
Nampidirin'i simplex @ 13:52, 2007-04-16 [Valio]
Tena mahavariana tokoa izany saingy tsy misy maharatsy azy mihitsy satria manampy be dia be amin'ny fifantohana eo ampivavahana ireo rehetra misongadina ireo.
Ny hany sisa andrasana izany dia hoe hisarontava koa ve ny vehivavy rehefa hivavaka ao sa tsotra ihany.
Misaotra an'i Jentilisa nizara.
Nampidirin'i soanja @ 16:06, 2007-04-16 [Valio]
Manahy ihany aho ho'a!!!
Raha jerena ny hetsiketsiky ny silamo hiringiriny manerana ny tany dia hoy aho hoe manahy ihany aho.
Misaotra an'i Jentilisa nampita vaovao.
Nampidirin'i kally @ 19:03, 2007-04-16 [Valio]
Mety tsy ho io no lehibe indrindra aty Afrika, fa mety ho fahatelo.
1-Bazilika (Katolika Romana) ao Yamoussokro Cote d'Ivoire
2-Faith of Tabernacle (Winner's chapel) ao Lagos Nigeria izay mahazaka olona 50000.
Mety tsy hisaron-tava ny vehivavy, izay efa misaron-doha.
Fa manahy ve i jentilisa fa lasa hirona ho silamo ny fivavahana ao? Mahakely finoana ahy aloha raha izany.
Ilay manala kiraro dia mety mba hampihenana @ fahasahiranana @ fanadiovana satria ho henjana ihany ny hamafa io trano io. Fa dia ho hisy asa vaovao hiforona indray izany ny @ hitantanana ireo kiraro marobe ko! Ny mpiandraikitra an'io kosa aloha angamba tsy maintsy manao saron'orona e.lol
... Ho vita @ 2012 izany ilay fiangonana, i Razoky moa efa naminany fa ho filoha @ 2013... mmmmm
Nampidirin'i Kwasi @ 23:14, 2007-04-16 [Valio]
Ahitan-javatra ihany koa ny filazana avy aminareo. Tetikasa kendrena ho vita ao anatin'ny dimy taona io fiangonana io.
Ny tian'ny Apokalypsy holazaina dia fiangonana mitafo. Izay izao no tsy ahitantsika ny Basilique de St Pierre ao Vatican. Mitovy amin'io ihany koa ny ao Yaoussokro raha tsy diso aho. Ny faith of Tabernacle kosa indray dia tsy fantatro na mitafo na tsia fa manomboka matanjaka ihany koa io fiangonana io eto Madagasikara.
Nampidirin'i jentilisa @ 07:10, 2007-04-17 [Valio]
fiangonana sa mosquée
Raha mba nataon'i mailhol ozinina io na karazan-javatra tahaka izany dia angamba mba nampiditra asa betsaka ho an'ny olona raha toa ka tena hanasoa (fa tsy asa soa)no heverina. Vola be laniana amin'io ve tsy tokony mba nahavitàna zavatra hafa nanova na dia kely monja aza ny isanandron'ny olona izay niasa tao ?
Ny fanjakan'ny lanitra anie tsy mampiasa devizy ka hoe hamerim-bola e !
Nampidirin'i mizàna @ 11:00, 2007-04-17 [Valio]
raha avadika kely ny mizàna dia azo oharina amin'ny ozinina... ara-panahy ny fiangonana.
raha azoko tsara ny resaka dia i mailhol no tompon'antoka amin'izao raharaha izao : tena ahazoam-bola be izany fiangonana. manome vokatra ara-bola financier ihany koa ny ozinina !
Nampidirin'i Rajiosy @ 12:54, 2007-04-17 [Valio]
Efa nolazainy moa fa zato tapitrisa (Ariary?) ny eo ampelatanany amin'izao fotoana izao.
Nampidirin'i jentilisa @ 16:05, 2007-04-17 [Valio]
Sao dia ny arsitekta no arabo? Fa mety ho danz ihany aloha raha mifangaro toerana ny lahy sy ny vavy amin'izany an. Hoe ao am-piangonana, samy mipetraka ambany, mifampikisikisina ao, dia mety samy miondrikondrika eo daholo, ny vehivavy amin'io manao zipo ... hmmm mizana > raha teo am-pelatananao ilay vola, dia mety ho izay no nataonao ... saingy tsy izay rajiosy > saingy tokony ho tsy olombelona no tompon'ny volan'ny fiangonana. Ary mampisy fakam-panahy io resaka vola sy vahoaka io an.
Nampidirin'i lapino @ 14:31, 2007-04-18 [Valio]
villa milay ao Tana no vitan'izany fa tsy mahvaita trano mahangona olona dimy arivo sy iray alina velively izany !
Nampidirin'i Rajiosy @ 16:41, 2007-04-18 [Valio]